Fiarovana amin'n y covid-19 - Hotaperina amin’ity volana ity ireo fatram-baksiny an’hetsiny • AoRaha
Fatram-baksiny “Covishield”, fiarovana amin’ny valanaretina Covid-19, miisa dimanjato sy roa arivo sy enina alina tamin’ireo dimy alina sy roa hetsy nohafaran’ ny Fanjakana malagasy no efa voatsindrona tamin’ireo sokajin’olona samihafa, hatramin’ny omaly. Manome taha 25% amin’ny fahalanian’ny fatra teo am-pelatanan’ny foibem-pitantanana momba ny fandaharana asa malalaka amin’ny fanaovambaksiny (DPEV) io tarehimarika io, araka ny fampahafantarana nataon’ny minisiteran’ ny Fahasalamam-bahoaka.
Noho ny fanakaikezan’ny daty farany hahafahana mampiasa an’ireto andiany voalohany amin’ny vaksiny “Covishield” ireto no tsy maintsy handaniana an’ireo fatra dimanjato sy fito arivo sy valo alina sy iray hetsy, amin’ity volana ity.
Fantatra fa amin’ny alakamisy 17 jona izao no daty farany hahazoana mampiasa an’ireo vaksiny ireo. “Tsikaritra ny fandehanan’ny fanaovam-baksiny miadana any amin’ny faritra sasany amin’izao fotoana izao. Miha miakatra kosa ny isan’ireo fangatahana voaray ho an’Analamanga sy Diana. Misy ny paikady amin’ny fitsinjarana araka ny tokony ho izy an’ireo vaksiny mba hanampiana ny faritra hafa mbola mila azy. Tsy maintsy hanafarana fatra any amin’ireo faritra ireo, araka izany, ny fanampiana an’ireo vaksiny telo alina efa nomena an’ Analamanga teo aloha”, hoy Dr Rakotonavalona Rivomalala, talen’ny DPEV.
Tsiahivina fa nofantenana arakaraka ny sokajin’olona ny fanaovam-baksiny “Covihield” tany am-boalohany, toy ireo mpiasan’ny fahasalamana, zokiolona sy marefo ary mpitandro ny filaminana. Nanomboka naparitaka tamin’ny olon-drehetra mihoatra ny valo ambin’ny folo taona izany, nony taty aoriana. Nampitomboina ihany koa ireo ivon-toerana hahafahana mitsindrona ny fatra voalohan’ny vaksiny, tahaka ny teto Antananarivo.
Vehivavy mampinono sy bevohoka
Tafiditra ao anatin’ireo sokajin’olona mihoatra ny 18 taona afaka manao vaksiny fiarovana amin’ny valanaretina Covid-19 ny vehivavy mampinono sy mitondra vohoka. Tsy tokony hanana ahiahy momba ny toe-pahasalamany manoloana ny fanaovana an’io vaksiny io izy ireo, raha ny fanamarihan’ny mpitsabo. Ilaina foana kosa ny fanatonana mpitsabo na mpampivelona mba hamantarana ny toe-pahasalamany sy toe-batany mialoha ny hanindronana ny vaksiny.
Hetsika eny amin’ny oniversite
Nosokafana, omaly, ny foibe fanaovam-baksiny na “vaccinodrome” eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo. Hahafahan’ireo mpianatra, mpampianatra sy mpandraharaha hisitraka ny vaksiny “Covishield” io foibe io ary tsy an-tery mihitsy. Raha ny tarehimarika nomen’ny Pr Ravelomanana Mamy, filohan’ny Oniversiten’Antananarivo dia manodidina ny roanjato sy arivo ny isan’ny mpandraharaha eny, raha maherin’ny arivo ny mpampianatra ary roa arivo sy telo alina no mpianatra. Entanin’ireo mpitantana ny oniversite ny fanaovana vaksiny fiarovana amin’ny Covid-19 noho ny fahamaroan’ny olona mivezivezy eny, na ihany koa ny fahamaroan’ireo mpianatra amin’ny taona iray.